Ataon’i Iran Lasibatra ny Sazy Amerikana Amin’ny Alalan’ny Fandrahonana ny Apple · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Aogositra 2016 9:42 GMT
Iraniana mitsidika mpivarotra Apple tsy ofisialy ao Tehran. Sary nalaina tao amin'ny ICHRI ary nahazoana alalana.
Nivoaka voalohany tao amin'ny ny vohikala Hetsika Iraisampirenena ho an'ny Zon'olombelona ao Iran ny voatran'ity lahatsoratra ity.
Nilaza tamin'ny Apple ny manampahefana ao Tehran fa tsy maintsy manokatra birao ao Iran izy na hiatrika fandraràna manerana ny firenena amin'ny vokatra Apple rehetra. Ny fandrahonana, araka ny nolazain'ny manampahefana dia natao hanangonana ireo hetra tsy niditra tamin'ireo iPhones an-tapitrisany nampidirina antsokosoko tao amin'ny firenena isan-taona, saingy nilaza ireo manam-pahaizana fa ny tena tanjona dia ny hanalefahana ny sazy Amerikana izay mametra ny fitobahan'ny fampiasam-bola ao Iran ankehitriny.
“Raha tsy manana birao solontena ofisialy ao Iran ny [Apple], ho alaina any amin'ny magazay avokoa ny finday rehetra vokarin'ity orinasa ity,” hoy i Abbas Nakhaei, filohan'ny Hery Manokana Miady Amin'ny Fampidirana Antsokosoko, tamin'ny antsafa nifanaovana tamin'ny Sampam-baovao mahery fiteny Tasnim tamin'ny 17 Jolay 2016.
Ho fandresena lehibe ho an'i Iran ny fitondrana ny Apple amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny firenena, nilaza i Iran fa tsy nitondra fampiasam-bola vahiny nantenaina ho an'ny firenena ny fanasoniavana ny fifanarahana nokleary sy ny fanalefahana ny sazy iraisampirenena.
Afaka mivarotra ny solitaniny eo amin'ny sehatra iraisampirenena i Iran ary malalaka afaka manorina toeram-pivarotana ao amin'ny firenena ireo orinasa tsy Amerikana, saingy mbola voaràra tsy hiasa ao Iran ireo orinasa Amerikana (anisan'izany ireo orinasa sasany betsaka mitady) noho ny sazy tavela mbola tazonin'i Washington ao amin'ny Repoblika Islamika.
Amin'ny fandrahonan'izy ireo ny Apple, miharihary fa te hanafoana ny indostria mpampiditra iPhone antsokosoko marobe ao amin'ny firenena, izay tsy ahafahan'ny governemanta mahazo fidiram-bola amin'ny hetra tena ilaina ny manampahefana Iraniana. Tombanana ho 6 tapitrisa ireo mpisera iPhone mavitrika ao Iran, araka ny tatitra tamin'ny 20 Jolay 2016 tao amin'ny gazety Donya-e-Eghtesad, na dia nampidirina an-tsokosoko tao aza ny ankamaroan'ireo finday avy any Dubai.
Mihevitra ireo manampahaizana fa ny tena tanjon'ny fandrahonana dia ny handrava ireo sakana napetraky ny sazy Amerikana ho an'i Iran. Raha azo terena hanorina birao ao amin'ny tany Iraniana ny Apple, voatery hamaha ny olana ara-teknika sy momba ny lalàna izay manakana azy (sy ny orinasa hafa) tsy afa-miasa ankehitriny ao amin'ny firenena ny orinasa. Toa matoky tena i Tehran fa hanaraka ny dian'ny Apple ireo orinasa hafa. Amin'ny fikendrena ny Apple, miezaka manokatra varavarana ho an'ny orinasa Amerikana hafa mba hiditra amin'ny tsena Iraniana ny Repoblika Islamika.
Tsy mbola azo heverina ny hanarahan'ny Apple izany, na fara fahakeliny ao anatin'ny fotoana fohy, ary mahagaga raha hanao sorona hizaka ny fiantraikany ara-bola sy ara-ketra amin'ny fanitsakitsahana ny sazy Amerikana tsy misy fifampiresahana mialoha ity raharaha ity miaraka amin'ny manampahefana Amerikana izy.
Nilaza i Washington fa olan'i Tehran ny fahasahiranan'i Iran amin'ny fisarihana fampiasam-bola avy any ivelany, manome tsiny ny sehatry ny banky efa lany andro sy ny tontolon'ny fandraharahana manjavozavo ao amin'ny firenena. Na izany aza, nanampy betsaka nanakana ny tontolon'ny fampiasam-bola avy any ivelany ny sazy Amerikana mitohy ao Iran noho ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona, ny fampihorohoroana, ary ny fandaharan'asa balafomanga.
Ankoatra ny fanomezana fotoana farany ny Apple, nilaza ny Hery Manokana Miady Amin'ny Fampidirana An-tsokosoko fa ny mpisera iPhone rehetra ao Iran dia tsy maintsy manoratra mombamomba ny findain'izy ireo ao anatin'ny herinandro vitsivitsy manaraka. Manana laharana manokana Famantarana Ny Fitaovana Finday Iraisam-pirenena (IMEI) ny finday tsirairay avy. Raha tsy mandrakitra izany laharana izany hatramin'ny 22 Septambra 2016 ny tompon'ny iPhone, dia nilaza ny manam-pahefana fa hotapahan'izy ireo ny tolotra amin'ny fitaovana. Takiana ihany koa ireo mpivarotra mpaninjara mba hanoratra mombamomba ireo iPhones vaovao rehetra.
“Tsy mahazo mivarotra izay marika tsy voarakitra ao amin'ny Ministeran'ny Indostria, Fitrandrahana sy ny Varotra ireo magazay mpaninjara [Raha mivarotra finday tsy voarakitra ara-panjakana izy ireo] dia hohenjehina amin'izany,” hoy i Karimi Khorasani, filohan'ny Sendikàn'ny Mpaninjara Fifandraisan-davitra tamin'ny 21 Jolay 2016.
Na ny mpanapa-kevitra ara-politika iraniana miaro ireo fepetra vaovao ireo, na izany aza, dia mahita ireo fitsipika vaovao ho tsy mifanaraka amin'ny fampiharana ny lalàna ataon'ireo manampahefana.
Tamin'ny 23 Jolay 2016, nanambara fahatarana amin'ny fandraketana ireo finday ny filohan'ny departemantan'ny Fampahalalam-baovao sy ny Seraseram-bahoaka ao amin'ny Minisiteran'ny Fifandraisana, noho ny tsy fahampian'ny fiomanana. Tamin'ny 25 Jolay, na izany aza, nanambara i Ghassem Khorshidi, mpitondratenin'ny Foiben'ny Ady amin'ny Fampidirana An-tsokosoko ao Iran fa efa eo an-dalana ny andrana fanatanterahana izany amin'ireo mpisera voafantina [voafetra isa].
Folo taona lasa izay, tamin'ny 2006, efa niezaka nanery ny vahoaka manana finday mba hanoratra ny mombamomba ny findain'izy ireo any amin'ny fanjakana ny governemanta mba hiadiana amin'ny fampidirana entana an-tsokosoko. Tsy nahomby ny ezaka, na izany aza, “satria tsy nety niara-niasa ireo mpandraharaha amin'ny finday,” araka ny filazan'i Alireza Golestani, filoha lefitry ny Hery Manokana Foibe Miady Amin'ny Fampidirana Entana sy Vola Vahiny An-tsokosoko, tamin'ny 30 Oktobra, 2015.
Nilaza tamin'ny Hetsika Iraisampirenena ho an'ny Zon'Olombelona ao Iran ny mpaninjara Apple iray ao Tehran izay nangataka tsy hotononina anarana fa amidy 10 isanjato amboniny eo ny iPhones, hatramin'ny nandrahonan'ny manampahefana Iraniana hanenjika ireo vokatry ny Apple.
Navoaka tao amin'ny tranonkalan'ny Hetsika Iraisampirenena ho an'ny Zon'olombelona ao Iran ny dika voalohan'ity lahatsoratra ity.